⚽One Shot >>>> One Goal.⚽ – အခါပေး ဗေဒင်
akhapaybaydin 12 Jun 2020 12 Jun 2020 Uncategorized
(Online ​ပေါ်တွင်​ ကြိုတင်​​ဟောခဲ့​သော ​ဟောကိန်းများစာရင်း။)
1. Release of Myanmar Seafarers from Somalia Pirates (24-Jan-2011)
2. AFC Cup (Myanmar Vs Malaysia) (2-Jul-2012)
3. မုန်တိုင်းကြီးများအန္တရာယ်နှင့် မြန်မာပြည် (12-Jul-2012)
4. သမ္မတအိုဘားမား အနိုင်ရမလားနှင့် KP ပညာ (26-Jul-2012)
5. ပန်းပန်နေဦးမည့် အာဆက် (09-Aug-2012)
6. ဒေါ်​အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ်နှင့် K.P ပညာ (14-Sep-2012)
7. ကမ္ဘောဇဘဏ်သတင်းနှင့် K.P ပညာ (11-Oct-2012)
8. တကယ်တိုက်မှာလား အမေရိကန် (10-Sep-2013)
9. Football Final Match (Thai vs Indo) (12-Dec-2013)
10. ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာမည့်သူ နောက်တစ်ဦးအား အစိုးရ ထပ်မံခွင့်ပြု (11-Jan-2015)
11. ငြိမ်းချမ်းရေးအလှမ်းဝေးနေဦးမည့် ၂၀၁၅ (25-Feb-2015)
12. ​​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ သပိတ်​​မှောက်​မ​မှောက် (04-Apr-2015)
13. ငြိမ်းချမ်းရေးအလှမ်းဝေးနေဦးမည့် ၂၀၁၆ (24-Mar-2016)
14. Birth Time Rectification (​မွေးချိန်​ရှာ​ဖွေခြင်း)
15. Burnley Vs Crystal Palace
16. ဦး​မော့လာ​တော့မည့်​ အ​မေရိကန်​စီးပွား​ရေး
17. ​နောက်​ပြန်​သွားမယ့်​ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်​
18. မြန်​မာ VS ထိုင်း ဆူဇူကီးဖလား ​ဘောလုံးပြိုင်​ပွဲ
19. တကယ်​တိုက်​မှာလား အ​မေရိကန်​
20. The Rumour, True or Not? (​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းဆုကြည်​ ​လေဖြတ်​သွားပြီဆိုတဲ့ ​ကောလဟလ​တွေထွက်​လာလို့ တွက်​ကြည့်​ထားတာပါ။)
21. ကံ​ကောင်းလာမည်​ မြန်​မာပြည်​- ၂၀၁၉
25. Will Joko Widodo win or not?
31. Donald Trump သက်​တမ်းပြည့်​မလား
33. US Vs Iran
36. အ​မေရိကန်​- တရုတ်​ ကုန်​သွယ်​​ရေးစစ်​ပွဲ
37. US Vs Iran
38. သြစတြေးလျ တောမီး
39. NLD အစိုးရ သက်​တမ်းပြည့်​မလား
40. မြန်​မာ့စီးပွား​ရေး အလားအလာ
41. ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းဆုကြည်​ သမ္မတဖြစ်​မလားနှင့်​ KP ပညာ
42. ရှစ်​​လေးလုံးပါတီ မှတ်​ပုံတင်​အခါ
47. ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (မြန်မာပြည်)
48. ကိုဗစ် (တောင်ကိုရီးယား)
50. ကိုဗစ်ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ
09 2500 61346
(Online ပျေါတှငျ ကွိုတငျဟောခဲ့သော ဟောကိနျးမြားစာရငျး။)
3. မုနျတိုငျးကွီးမြားအန်တရာယျနှငျ့ မွနျမာပွညျ (12-Jul-2012)
4. သမ်မတအိုဘားမား အနိုငျရမလားနှငျ့ KP ပညာ (26-Jul-2012)
5. ပနျးပနျနဦေးမညျ့ အာဆကျ (09-Aug-2012)
6. ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏ အမရေိကနျခရီးစဉျနှငျ့ K.P ပညာ (14-Sep-2012)
7. ကမ်ဘောဇဘဏျသတငျးနှငျ့ K.P ပညာ (11-Oct-2012)
8. တကယျတိုကျမှာလား အမရေိကနျ (10-Sep-2013)
10. ဓမ်မစတေီခေါငျးလောငျးရှာမညျ့သူ နောကျတဈဦးအား အစိုးရ ထပျမံခှငျ့ပွု (11-Jan-2015)
11. ငွိမျးခမျြးရေးအလှမျးဝေးနဦေးမညျ့ ၂၀၁၅ (25-Feb-2015)
12. ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ရှေးကောကျပှဲ သပိတျမှောကျမမှောကျ (04-Apr-2015)
13. ငွိမျးခမျြးရေးအလှမျးဝေးနဦေးမညျ့ ၂၀၁၆ (24-Mar-2016)
14. Birth Time Rectification (မှေးခြိနျရှာဖှခွေငျး)
16. ဦးမော့လာတော့မညျ့ အမရေိကနျစီးပှားရေး
17. နောကျပွနျသှားမယျ့ ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုဟျ
18. မွနျမာ VS ထိုငျး ဆူဇူကီးဖလား ဘောလုံးပွိုငျပှဲ
19. တကယျတိုကျမှာလား အမရေိကနျ
20. The Rumour, True or Not? (ဒျေါအောငျဆနျးဆုကွညျ လဖွေတျသှားပွီဆိုတဲ့ ကောလဟလတှထှေကျလာလို့ တှကျကွညျ့ထားတာပါ။)
21. ကံကောငျးလာမညျ မွနျမာပွညျ- ၂၀၁၉
31. Donald Trump သကျတမျးပွညျ့မလား
36. အမရေိကနျ- တရုတျ ကုနျသှယျရေးစဈပှဲ
38. သွစတွေးလြ တောမီး
39. NLD အစိုးရ သကျတမျးပွညျ့မလား
40. မွနျမာ့စီးပှားရေး အလားအလာ
41. ဒျေါအောငျဆနျးဆုကွညျ သမ်မတဖွဈမလားနှငျ့ KP ပညာ
42. ရှဈလေးလုံးပါတီ မှတျပုံတငျအခါ
47. ကျောရိုနာဗိုငျးရပျဈ (မွနျမာပွညျ)
48. ကိုဗဈ (တောငျကိုရီးယား)
50. ကိုဗဈဘာလဲ၊ ဘယျလဲ
Previous သြစတြေးလျ တောမီး (သွစတွေးလြ တောမီး)
Next ကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျးနှငျ့ KP ပညာ